Pinegrow: Inoshamisa Desktop Mhariri neWordPress Kubatanidzwa | Martech Zone
Muvhuro, July 20, 2015 Svondo, July 19, 2015 Douglas Karr
Ndiri pachokwadi handina chokwadi chekuti ndakamboona yakanakisa kodhi kodhi pamusika kupfuura Pinegrow. Mupepeti anopa edit-in-nzvimbo mashandiro pamwe neazvino-nguva anoteerera anotarisa. Kupfuura zvese, Pinegrow haina kuwedzera chero masisitimu, marongero kana masitaera kune kodhi yako.
Zvimwe zvakakosha zve Pinegrow:
Kugadzirisa - Wedzera, gadzirisa, fambisa, dzvanya kana kudzima maHTML zvinhu.
Framework - Tsigiro yeBootstrap, Foundation, AngularJS, 960 Grid kana HTML.
Mazhinji-peji kurongedza - Rongedza akawanda mapeji panguva imwe chete. Duplicate uye magirazi mapeji - kunyangwe aine akasiyana zoom mazinga uye saizi yedhizaini.
CSS Mupepeti - Rongedza CSS mitemo nemaziso kana kuburikidza nekodhi. Shandisa Stylesheet maneja kuumbiridza, kubatanidza uye kubvisa masheets.
Webhu Kugadzirisa - Pinda URL uye gadzirisa mapeji ari kure: chinja marongero, gadzirisa zvinyorwa uye mifananidzo, gadzirisa CSS mitemo.
Kugamuchira Marongerwo - Gadzira inoteerera marongero neMedia query mubatsiri chishandiso. Wedzera tsika mabhureki kana kurega Pinegrow vaone nekuongorora masheets.
Kunyangwe zvisingaite, Pinegrow ine WordPress yekuwedzera-iyo inokutendera iwe kuisa WordPress zvinhu uye kuratidza zvirimo zvirimo. Ichi chinhu chakanakisa chinotonhorera kune vako vari kuvandudza kana kugadzirisa madingindira eWordPress.
Tags: code editoredit-in-nzvimbophp mupepetipainiWordPress theme themewysiwyg
Gumiguru 29, 2015 pa 10:09 AM
Ini ndinoshandisa Pinegrow mukufamba kwangu uye zvino ini ndinoshanda 2x nekukurumidza. Kana zvakatowanda.
Rudo Pinegrow. Ini ndakawanawo emahara plugins ayo aunogona kurodha pano https://pluginsforpinegrow.com